नागरिकलाई हामीले अन्य पालिकाको जस्तो चर्को कर लगाएका छैनौ, ज्यादै कम छ : प्रमुख प्याकुरेल - Palikanews.com
नागरिकलाई हामीले अन्य पालिकाको जस्तो चर्को कर लगाएका छैनौ, ज्यादै कम छ : प्रमुख प्याकुरेल
२५ मंसिर २०७७, बिहीबार १०:२३
ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख छत्रपति प्याकुरेलसँग पालिका न्यूज डट कमको नियमित स्तम्भ ‘६ प्रश्न’का लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
१) तपाईंको नगरपालिकामा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले हाम्रो फुङलिङ नगरपालिकामा जम्मा ११ वटा वडाहरु छन् । कोरोनाको अवस्था त त्यति जटील छैन । आज भन्दा एक हप्ता अगाडि ३० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । अहिले कोही पनि गम्भीर अवस्थाका बिरामी हुनुहुन्न ।
२) थप संक्रमण वृद्धि हुन नदिन नगरपालिकाको योजना के छ ?
मेरो नगरपालिकाले जाडो महिना सुरुभएसँगै कोभिड १९ संक्रमण वृद्धि हुने भयले साताको दुई पटक नगरपालिका र जिल्ला अस्पतालको समन्वयमा मंगलबार र शनिबार ज्वरो, रुघाखोकी लागेका र लक्षण देखिएकाहरुको परीक्षण गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ ।
३) तपाईंहरुले नगरको नेतृत्व लिएको साढे ३ वर्ष भएको छ । महत्वपूर्ण कामहरु के–के गर्नुभयो ?
अहिले हामी करिब चार वर्षको दौरानमा छौंं । हामी ७४ सालमा निर्वाचित भएर आएको साढे तीन वर्ष बितेर चार वर्ष लाग्न लागेको छ । हामीसँग भएको साधन स्रोत, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट आउने समपुरक अनुदान, विशेष अनुदानहरु र आन्तरिक स्रोतले उठ्ने रकमहरुले जनताको आवश्यकताअनुसार काम गरेका छौंं । स्रोत सीमित भएकाले पर्याप्त काम गर्न सकेका छैनौं । हामीले यो अवधिमा ५÷७ वटा महत्वपूर्ण काम गरेका छौंं ।
बजारको फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि यही आर्थिक वर्षमा ७४ रोपनी १२ आना जग्गा ६६ लाखमा किनेका छौंं । फुङलिङ नगरपालिकाको लागि पछि सम्म टेक्ने गरि दिगो फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि हामीले जग्गा व्यवस्थापन गरेका छौंं । अहिले हामीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट रु २ कारोड अनुदान यो वर्षमा आएको छ । र त्यसको डिपीआर गर्दा लाग्ने कर ७ करोडको हारहारीमा छ । र यही आर्थिक वर्षमा केही दिनमै यसको ठेक्का खोल्ने तयारीमा छौंं । एक करोडको काम असार संम्म गरिसक्ने छौंं र अर्को एक करोडको काम अर्को वर्षको लागि खर्च गर्ने छौंं ।
आउँदो वर्षको लागि पनि राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेटको लागि पहल गरिरहेका छौंं । र एउटा महत्वपूर्ण काम गरेका छौं जस्तो लाग्छ । अर्को हामी आउँदा हाम्रो नगरपालिकाको भवन थिएन, साढे ८ करोडको लागतमा यो आर्थिक वर्षमै २६÷२७ कोठाको कार्यालय भवन निर्माण गरेर आफ्नै नगरपालिकाको भवनबाट सेवा दिने छौं । अहिले भाडाको घरबाट सेवा दिरहेका छौं र यो आर्थिक वर्षमा त्यो काम पनि गर्ने छौं । अर्को खेल मैदान निर्माण गरेका छौं । हाम्रो नगरपालिकामा १३ वटा जातिहरुको बसोबास रहेका छन् र त्यसको लागि वहुसाँस्कृतिक संग्रहालय निर्माण गर्दैछौं । संग्रहालय निर्माणका लागि २१ रोपनी जग्गा खरिद गरेका छौं । त्यसको डिपिआर यही आर्थिक वर्षमा तयार गर्ने छौं । यो नगरपालिकाको पहिलो नगर प्रमुख म आफैँ भएकोले बढ्दो सवारी चापलाई कम गर्नका लागि बसपार्क निमार्णको लागि यो आर्थिक वर्षमा पूरा गर्ने गरि अगाडि बढेका छौं । अबको २ वर्षभित्र नगरपालिकाको ११ वटै वडामा वडा कार्यालयहरुका भवन निर्माण गर्ने छौं । हाम्रो नगरपालिकाको सबै वडामा स्वास्थ्य केन्द्रहरु छैनन्, अहिलेसम्म पाँच वटा वडामा स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गरिसकेका छौं । हामी यो आर्थिक वर्ष भित्र सबै वडामा स्वास्थ्य सेवाको पहुच पु¥याउने छौं । सडक भित्र १३ सय मिटर कालोपत्रे गरेका छौं । ८ सय मिटरको ढल निर्माण गरिएको छ । २ सय वटा कल्भर्टहरु निर्माण गरेका छौं । प्रत्येक वडाहरुमा खेलमैदान निर्माण गरेका छौं ।
शिक्षाको क्षेत्रका हामी नगरपालिका भित्र संघीय सरकारको बजेटबाट हामीले भवनहरु निर्माण गरेका छौं । हामीले काम गर्न नसकेको भनेको प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेट तीन करोडमा वहुप्राविधिक शिक्षालय निर्माण गर्ने काम हो । तीन करोडको बजेट जिल्ला जनस्वास्थ्यमा आएको र त्यो पैसा फेरि खर्च नगर्नु भनेर फेरि अर्को पत्र आएको भनेर जनस्वास्थ्यले जानकारी गराएपछि हामीले त्यो काम अगाडि बढाउन सकेका छैनौं । अरु कामहरुमा विकास निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा हामिले काम गरिरहेका छौं ।
४) तपाईंको नगरपालिकामा यो वर्ष प्रमुख प्राथमिकतामा परेका विकासका योजनाहरु के–के छन् ?
यो आर्थिक वर्षमा वहुसाँस्कृतिक संग्रहालय, नगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन, बसपार्क निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि लगायतका कामहरु यो वर्षमा प्रमुख प्रथामितामा परेका छ ।
५) केन्द्र र प्रदेशमा तपाईंकै पार्टीको सरकार छ, नगरपालिकाको विकास गर्न तपाईंलाई कत्तिको सहयोग पुगेको छ ?
साधन स्रोत सरकार भएर मात्र नहुने रहेछ । सरकार आफ्नो हुँदैमा केही नहुने रहेछ । यो संघीय सरकारको बजेट हामीले प्रप्त गर्ने हामी स्थानीय तहले हामीले उठाउने आफ्नो राजस्वमा पनि भर पर्ने रहेछ । हाम्रो आन्तरिक राजस्व २ कारोडको हाराहारीमा पनि छैन । हामीले पाउने बजेट गत वर्षको भन्दा दुई चार लाख मात्र कम हो । तर पनि असर परेको छैन । तर यो बाटाघाटा, कुलकुलेसो बनाउने कुरामा मैले संघीय सरकारबाट यो वर्षको लागि करिब १४ करोड रुपैयाँ सहरी विकास मार्फत पा्रप्त गरेको छु । संघीय सरकारबाट सन्तोषजक सहयोग पाएको छु ।
सुकेटारदेखि पाथीभरा जाने बाटो प्रदेश सरकारले आफैँ कालोपत्रे गरिदिन्छौं, बनाउँछौं भनेर भन्यो तर दुईतीन दिन अगाडि मात्रै प्रदेश सरकारले कोभिड १९ का कारण हामीसँग बजेट अभाव भएकोले बनाउन सकेनांै भनेर लिखितरुपमा नै संघिय सरकारलाई पठाएको छ ।
६) बाँकी कार्यकालमा तपाईंले के के काम गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
अब डेढ वर्ष भित्रमा मैले चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्छु भनेको छु । पाथीभरा क्याम्पसलाई डिग्री सञ्चालन गर्छु भनेको थिएँ र गत वर्ष देखिनै त्यो काम पूरा भयो । मैले सुकेटारमा भ्यूटावर निर्माण गर्छु भनेर भनेको थिएँ । सुकेटारदेखि अलि माथि गुप्ते देउरालीदेखि माथि भ्यूटावर निर्माण भएको छ । माननीय पर्यटन मन्त्री ज्युबाट १० लाख यो आर्थिक वर्षको र गत वर्षको नगरपालिकाको १० लाख गरि दुई आर्थिक वर्षमा २० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ । अझ पनि केही कामहरु गर्न बाँकी छन् । पर्यटन मन्त्रालयलाई पनि अनुरोध गरेका छौं पर्यप्त बजेटहरु व्यवस्था गरिदनुहोस् भनेर । पर्यटकीय ठाउँहरुको विकासको काम बाँकी १७, १८ महिनामा पूरा गर्छौं । इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्नेदेखि सेवा सुविधालाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउने प्रयत्न हुनेछ । हामीले अन्य पालिकाजस्तो चर्को कर लगाएका छैनौं, ज्यादै कम छ ।